Ambohimanga Rova: fatim-behivavy hita tao anaty kirihitr’ala | NewsMada
Ambohimanga Rova: fatim-behivavy hita tao anaty kirihitr’ala
Vehivavy iray manodidina ny 18 taona eo ho eo no hita faty tao anaty kirihitr’ala eny Ambohimanga Rova, omaly tolakandro. Nokendaina izy raha ny fitsirihana nataon’ny dokotera nanao fizahana ny razana…
Niharan’ny vonoan’olona feno habibiana ity vehivavy ity, araka ny fitsirihana nataon’ny dokotera nanao fizahana ny razana. Mbola teny an-kodiny avokoa ny fitafiana nanaovany tamin’ny fotoana nahitana ny fatiny tao anaty kirihitr’ala. Tsy nisy taratasy nahafantarana ny mombamomba azy kosa teny aminy. Voamarin’ny fanadihadiana savaranonando nataon’ny mpitsabo niaraka tamin’ny zandary teny an-toerana fa ny rojo nanaovany ihany no nanakendan’ireo jiolahy nahavanon-doza izao vonoan’olona izao. Tsy mbola fantatra kosa izay antony famonoana azy. Nambaran’ny fanadihadiana hatrany fa vonoan’olona tsotra izao sy fiketrehana valy faty ny ambadik’ity raharaha ity. Ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Ambohimanga Rova no ahafantarana ny marina rehetra momba ity vonoan’olona feno habibiana ity.
Fa nahitana fatin-dehilahy iray nitsirara teo amoron-dalana eny Behenjy RN 7, afakomaly alina tokony ho tamin’ny 10 ora. Tsy fantatra izay antony nahafaty azy fa ahina ho tratran’ny lozam-piarakodia na novonoin’olona tany an-toeran-kafa izy vao natsipy teny an-toerana.